फुटको डिलमा जसपा : केसमा बुहमत नहुँदा पार्टी विहिन हुने अवस्थामा ठाकुर
जेष्ठ १६ गते, २०७८ आइतवार
30th May, 2021 Sun १५:५५:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एक अर्कालाई स्पष्टिकरण सोधेको म्याद आज समाप्त हुँदैछ ।
योसँगै जसपामा औपचारिक फूट हुने करिब निश्चितजस्तै देखिएहो हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकीकरण भएका जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । तर पछिल्लो घटनाक्रममा जसपाको पूर्व जनता पार्टी समूहले केपी ओलीलाई समर्थन गरेपछि पार्टी फूट नजिक पुगेको हो ।
यसअघि दुबै अध्यक्षले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न जेठ ११ गते एक–अर्कालाई पत्र पठाएका थिए । दुबै पक्षले कसैलाई जवाफ नदिएपछि शनिबार फेरि एक–अर्कालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेपछि अब कार्वाही गर्ने बिन्दुमा उनीहरु पुगेका छन् ।
अध्यक्ष ठाकुरले पत्र प्राप्त गरेको म्यादभित्र चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक प्राप्त नभएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ बमोजिम निष्काशन समेतको कारवाही हुने चेतावनी यादवलाई दिएका थिए ।
​यादवका तर्फबाट पनि ठाकुर लगायतका नेतालाई सोही व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । यादवले ठाकुर पक्षलाई सोधेको स्पष्टीकरणको २४ घण्टे म्याद आज दिउँसो १ एक बजे सकिँदैछ । त्यसपछि उनीहरुमाथि कारवाही हुने जसपा पार्टी कार्यालयका सचिव प्रकाश अधिकारीले बताएका छन् । यादवका तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुरलगायत वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई स्पष्टीकरण पठाइएको थियो ।
स्पष्टिकरण र कार्वाहीपछि पार्टीको आधिकारिकताका लागि दावी गर्ने भएपनि ठाकुर पक्षलाई भने निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पक्षको दावी पुष्टि गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा पार्टीको आधिकारिकता निर्धारण हुने हुन्छ । यो अवस्थामा कार्यसमिति र कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत रहेको छ । जबकि संसदीय दलमा भने महन्थ ठाकुर पक्षको बहुमत रहेको छ ।
संसदीय दलमा बहुमत भएर मात्रै पार्टी विभाजन गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था भएकाले ठाकुर पक्षले केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसके उनलाई दलको आधिकारिता दावी गर्न कठीन हुने देखिन्छ ।
सम्भवतः आज स्पष्टिकरणको मिति कुरेपछि दुबै पक्षको बैठकले ठोस निर्णय गर्नसक्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा जसपामा औपचारिक फूट हुने कुरा निश्चित जस्तै बनेको हो ।
Tags राजनीति जसपा उपेन्द्र यादव महन्थ ठाकुर
भाद्र ३० गते, २०७८ - ०९:५१
सभामुखलाई संविधान बाहिर विशेषाधीकार प्रयोग गरी सांसदलाई कारवाही गर्ने छुट छैन : घर्ती
संसदमा विपक्षी दलकोे अवरोध विरोधका नाममा विरोध जस्तो लाग्छ । यो कुनै सिर्जनात्मक काम भएन । संविधानभन्दा बाहिर सभामुखले विशेषाधीकार प्रयोग गरी निर्णय ग...
भाद्र ३० गते, २०७८ - ०९:४८
कानुनको कुरा नगरौ, दलीय व्यवस्थामा दलको निर्णय सभामुखले मान्नुपर्छ : अर्याल
संवैधानिक मर्यादा उलङ्घन भयो । जो संवैधानिक व्यक्तित्व हो, उसैले संविधानको परिपालन गरेका छैनन् । त्यस विरुद्ध अवाज उठाउने कुरा अवैधानिक हो भन्ने कुरा ...
भाद्र ३० गते, २०७८ - ०९:४५
सभामुखको भूमिका संविधान संवत् छ, संसदमा होहल्ला गर्नुको औचित्य छैन : खड्का
जुन पार्टी अवैध छ । जसले विधि, प्रकृया, संविधान, नियम कानून मिचेर काम गरेका छन्, त्यस्ताले हामीलाई कारवाही गर्नु पर्छ भन्नु आफैमा हास्यस्पद छ । उनीहरु...
भाद्र ३० गते, २०७८ - ०९:४३
संसदमा तीन महिला नेतृको बहस : सभामुखको भूमिका संसदीय विशेषाधीकार कि संविधान विपरित ?
सभामुख र विपक्षी दल एमालेको द्वन्दका कारण प्रतिनिधिसभामा मुडभेडको स्थिति सिर्जना भएको छ । आफुले निष्कासन गरेको १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरी द...
भाद्र २९ गते, २०७८ - ०९:३८
काठमाडौं । अमेरिकासँगको एकदिवसीय खेलमा नेपालले उत्कृष्ट जीत हासिल गरेकाे छ । गएराती भएकाे खेलमा नेपाल ५ विकेटले विजयी भएकाे हाे । नेपालमा जितम...
भाद्र २९ गते, २०७८ - ०९:२५
कहिलेदेखि पाइन्छ दशैका लागी नयाँ नोट ?
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष भने वितरण गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट निष्काशनको तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जनाए अन...
भाद्र २९ गते, २०७८ - ०९:२२
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै : के गर्ला प्रतिपक्ष ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध जारी राखेपनि सभामुखले सदनको कार्वाही अगाडि बढाएका हुन । संसदमा ...
भाद्र २८ गते, २०७८ - १४:०८
एमसिसि विरुद्ध विप्लव सडकमा
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विरोधमा नेकपा विप्लव समूहले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार मा...
भाद्र २८ गते, २०७८ - १४:०४
सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओलीको रिट निवेदनमा आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ । ओलीले निर्वाचन आ...
भाद्र २७ गते, २०७८ - १४:३४
विश्वप्रसिद्ध प्रगतिवादी साहित्यकार लुसुन भन्थे, ‘‘मरेकाहरूबाट बाँचेकाहरूले नसिके बाँचेकाहरू पनि मरेसरह हुन्छन्।’’ द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद...